Ghostwriter Sociology Waxaan caawimaad uga helayaa waxbarashadaada hada waraaqo
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga bulshada
Sociology wuxuu ku saabsan yahay bulshada. Soo bixitaanka, horumarka iyo isbeddelka qaab-dhismeedka bulshada iyo qoysaska ayaa ah waxa ugu weyn ee ay khuseeyaan cilmiga bulshada. U guuritaanka koorsooyinka kale ee waxbarashada - cilmu-nafsiga, cilmiga siyaasadda, dhaqaalaha - waa kuwo dareera oo mararka qaarkood aan si cad loo xadidin. Waxyaabaha loogu yeero qaabdhismeedka microsociological - qoyska, guurka - sidoo kale waa la baaraa lana falanqeeyaa. Tani waxay sidoo kale ku lug leedahay su'aasha ah sababta haweenku wali inta badan u helaan wax kayar ragga. Koorsada cilmiga bulshada, waddamo iyo dhaqammo kala duwan ayaa la isbarbar dhigayaa - kaliya ma ahan kuwa hadda jira, laakiin sidoo kale dhaqammadii hore ayaa la baari doonaa.
Shahaadada cilmiga bulshada waa inaan lagu khaldin aagga shaqada bulshada. Koorsada cilmiga bulshada waa koorso aragtiyeed oo fikradaha cilmigu ku jiraan horudhaca. Shaqada bulshada waxay ugu horreyn ku saabsan tahay waxyaabo la taaban karo oo aan daruuri ka noqon karin daraasadda cilmiga bulshada.
Daraasadaha cilmiga bulshada waxaa lagu dhammaystiri karaa shahaadada bachelorka ka dib muddada daraasadda caadiga ah ee 6 semesters. Kadibna waxaa lagu dari karaa shahaadada cilmiga bulshada (Sociology Master), oo soconeysa ugu yaraan 4 semestar una horseedaya shahaadada mastarka. Kadib markaad dhameyso shahaadada mastarka, waxaa macquul ah inaad shaqo kahesho suuqa shaqada furan ama aad kusii sugnaato jaamacada oo aad kasbato xirfad waxbarasho. Tani waxay si lama huraan ah u horseedi doontaa dhakhtar.
Waxaad baran kartaa cilmiga bulshada sida ugu weyn ama yar. Tusaale ahaan, waxaad isku dari kartaa cilmiga bulshada iyo
Barashada dhaqanka iyo diinta.
Muddada aad wax baraneyso waxaa ku soo food saari doona qaybo waxbarasho oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Falanqaynta qaab-dhismeedka bulshada
Hawlaha isbeddelka bulshada.
Shahaadada mastarka ee cilmiga bulshada ayaa sidoo kale lagu dari karaa maaddo labaad, tusaale ahaan.
Daraasadaha guud iyo isbarbardhiga suugaanta, iyo kuwo kale
Aad ayey u badan yihiin inta aad wax baraneyso Shaqada guriga, Darajada Bachelor iyo Muxaadarooyin macallin ah taas oo ay tahay in la qoro intaad wax baraneyso. Arrin aad u adag haddii aad rabto inaad wax walba hoos dhigto hal saqaf. Qorayaashayagu waxay ku caawin karaan tan. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraallo qoraal ah ugu qoraan qoraalladaada sayniska. Amarka Waxaad haysataa sheybaarkaagii dhammeeyey, waxaan ku gaarsiinaynaa waqtiga kama dambaysta ah oo tayo wanaagsan leh oo ay ku jiraan plagcan.
Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaad heli doontaa kugu filan inaad ku sameyso mowduucyo cilmiyaysan sida xiriirka ka dhexeeya dadka iyo mowqifyadooda cilmiga bulshada. Cilmi-baaris ku saabsan howlaha urur sidoo kale waa la falanqeeyay. Tusaalooyinka tan waa nidaamyada siyaasadeed, xarumaha waxbarashada, shirkadaha, xisbiyada, qoysaska, ururada ama xaafadaha. Imtixaanadani waqti badan ayey ku baxayaan si ay u helaan buundooyin wanaagsan oo imtixaannada ah. Qoraal-gacmeedku wuxuu ku siinayaa arrimo ku saabsan shaqadaada tacliimeed. Waqtigan xaadirka ah, sidoo kale, waxaan kaa caawin karnaa adiga Shaqada farsamada I caawi. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho mid. Kadib waxaan kuu soo wici doonaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan qaadan doonaa mashruucaaga. Intaad wax baraneyso, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cilmi baaris badan oo xagga cilmiga ah oo laga soo qaatay ilaha suugaanta. Waxaad kaloo ubaahantahay qoraallo tacliimeed sida Shaqada guriga, der shahaadada bachelor ama shahaadada Masterka curiso. Tani waa in dhammaan la sameeyaa inta lagu jiro waxbarashadaada. Gaar ahaan ardayda cilmiga bulshada iyo sayniska waxay adeegsadaan caawimaaddeena marar badan. Faa'iidooyinka tan waa kuwo iska cad. Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh iyada oo aqoontani ku abuuri karto waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin muddo gaaban. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Hada nala soo xiriir oo ku dalbo shaxankaaga kanaga shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waan ku soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay ka caawin doonaan abuurista iyo su'aalaha. Qorayaashayagu waxay ku qoraan shaxankaaga.
Soo gudbintaada cilmiyaysan sidaa Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. U oggolow soo gudbintaadu inay noqoto mid aqoon leh Shaqada guriga qor. Kuweena Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid oo kale sayniska tacliinta sii wad inaad xirfad yeelato awooddo.
Qoraalka qoraalka ee cilmiga bulshada
Qorayaasheena ku takhasusay cilmiga bulshada ayaa si cilmiyaysan ugu tababaran maadooyin badan oo cilmiga bulshada ah. Qorayaashayaga ghostwriters waxay horey u abuureen tiro aad u tiro badan. Waad ku dhalin kartaa shaxdan soo socota:
Dhamaan tusaalooyinka tacliinta
Waxaan tixgelineynaa mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna shaqsi ahaan, iyadoo ku xiran hadba hawsha gacanta lagu hayo, waxaan kugula talineynaa qoraaga cirfiidka oo sifiican ugu tababaran duurka. Waxaan uga jawaabnaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow. Tani waxay ku dhacdaa dhammaan waaxyaha iyo dabcan sidoo kale maadadaada sayniska. Noo soo dir codsi macaamil waxaanan kuu samayn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga. Gebi ahaanba caqli badan Waxaan kaa caawineynaa shaqada qibrada leh. Qoraal-gacmeedku wuxuu ardayda ka caawiyaa inay abuuraan shaqadooda waxbarasho. Hababka dareenka ayaa si dhif ah ardayda si macno leh u adeegsada, taas oo fahamka hababka ay aad muhiim ugu tahay cilmi baarista.
Sociology ee Cilmi-baarista
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrad sannado badan aaggooda cilmi-baarista umana baahna inay isbartaan muddo dheer. Waad ka faa'iideysan kartaa tan. Qoraal-gacmeedku wuxuu macno u samaynayaa maadadaada tacliimeed inta badan shaqada tacliimeed. Dalbo shaxankaaga sayniskaaga annaga Shaqada guriga oo aad hesho waajibaad la'aan dalab. Qaabab-dhismeedka tacliimeed, waa inaad u xilsaartaa hay'addayada 'ghostwriter'.
Rajada xirfadeed ee cilmiga bulshada
La soo wareegitaanka xirfadaha muhiimka ah ee maaddooyin kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u gasho noocyo kala duwan oo xirfado kala duwan ah. Bixinta aqoonta ficil ahaaneed waxay kuu suurtogelinaysaa inaad qalinjabiso inaad si fudud u bilowdo xirfaddaada. Mustaqbalkaaga shaqo waa tusaale ahaan:
Qeybta cilmiga bulshada ee ganacsiga
Inta badan ardayda qalin jabisay ka dib waxay boos ku leeyihiin xarumaha dawladda ama dhinaca waxbarashada dadka waaweyn, sida B. Xarumaha waxbarashada dadka waaweyn ama ururada shaqaalaha, oo la aqbalo. Taageerada laga helo qoraaga cirfiidka inta lagu gudajiro waxbarashadaada waxay ku siineysaa xulashooyinka soo socda:
Yaraynta dadaalka iyo waqtiga.
Waxqabadka tacliimeed ee aadka ufiican iyo isku xirnaanta goobtaada waxbarasho.
Si fudud u gelida nolosha xirfadeed.
Rajo xirfadeed oo aad ufiican taas oo ay ugu wacan tahay waxqabadka tacliimeed ee aadka ufiican.
Hubinta tayada ee cilmiga bulshada